Haverina amin’ny teny gasy hoe ny fampianarana? – Blaogin'i Voniary
Tafiditra ao anatin’ny PSE (Plan Sectoriel de l’Education) izay eo an-dalam-pandrafetana amin’izao fotoana izao ny fanovana ny teny ibeazana eny amin’ny ambaratonga fototra ho teny Malagasy. Hahasoa ve sa hitondra voka-dratsy ho an’ny ankizy Malagasy izany fanapahan-kevi-panjakana izany? Azo antoka fa hamerina ny hasin’ny tenindrazantsika io fiovana lehibe io. Efa niainantsika koa anefa ny fanagasiana ka hita fa tsy nahomby. Ahoana àry no hevitra?
Ny fanagasiana (1972-1977)
Raha fintinina dia vokatry ny nataon’ireo vitsy an’isa naniry ny hihazona ny tombontsoany manokana no nampandamoaka ny fanagasiana ny fampianarana tamin’izany fotoana izany. Raha tsaroantsika tsara dia tao anatin’ny fitondrana sosialista no namolavolana sy nampiharana ny fanagasiana. Ny Boky Mena mihitsy no namaritra izany ary nilaza fa tokony ampifanarahana amin’ny maha-malagasy ny votoatin’ny fampianarana. Ny zava-nisy anefa dia lasa nadika be fahatany tamin’ny teny gasy fotsiny ny fandaharam-pianarana frantsay sy ireo voambolana isan-karazany noho ny tsy fahamatoran’ilay paikady. Saritsarim-panagasiana, peta-toko sy tsy ampy fandinihana no notanterahina, hany ka tsy nahomby. Hoy indrindra I Mompera Remi Ralibera: “Ny rafitra Sosialista Revolisionera no tena nanimba ny fampianarana teto Madagasikara fa ny fanagasiana no nisolo vaika ny ankalana taty aoriana”.
Ny tenim-pirenena ibeazana
Tsy misy afa-tsy ny teny Malagasy no afahan’ny Malagasy mivoatra. Azavain’I E.D Andriamalala tsara ao anatin’ny boky Ny Fanagasiana fa mora kokoa amin’ny zaza Malagasy ny mandray ny lesona rehefa atao amin’ny teny Malagasy ny fampianarana. Tsy vitan’izany fa azo antoka kokoa ny hamokaran’i Madagasikara olom-banona feno: sady manam-pahaizana no manaja ny soatoavina Malagasy. Tsarovy fa tamin’ny teny Malagasy no nampitana fahalalana tamin’ireo mpianatra ho mpitsabo tany am-piandohana. Ary tamin’izany dia niloa-bava mihitsy ireo mpampianatra vazaha fa marani-tsaina ny Malagasy. Koa nahoana ary no tsy ho vita izany amin’izao? Ny 21 Febroary dia andro iraisam-pirenenena anandratana ny tenim-pirenena Ibeazana. Rehefa tonga io andro io dia miezaka mampatsiahy lalandava ny UNESCO fa raha te hanana firenena vanona dia ny tenin-dreny no tokony ampiasaina amin’ny fampianarana.
Ny PSE hamerina ny fampianarana amin’ny teny Malagasy
Tsy vao izao no nisian’io vinavina io fa tamin’ny 2008 ihany koa dia efa nandray fanapahan-kevitra ny hamerenana ny teny Malagasy ho teny ibeazana ny fitondram-panjakana. Tsy tontosa moa izany noho ny antony maro samy hafa. Izao indray, ao anatin’ny famolavolana drafitra ho an’ny fanabeazana (PSE) ny fanjakana, ka tafiditra ao anatin’izany ny momba ny teny.
L’Express de Madagascar 22/04/2017
Toy izao ny fanazavan’ny minisitrin’ny fampianarana, Paul Rabary, ny amin’ny antony tokony hampiasana ny teny gasy eny amin’ny ambaratonga fototra: “Ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny dia tokony hanara-maso ny fianaran’ny ankizy satria tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanabeazana ny zanany. Tsy voatery ahay teny frantsay anefa izy ireo. Fanampin’izany, maro ireo mpampianatra no tsy mahafehy akory ny teny frantsay nefa io no ampiasaina amin’ny vakiteny, soratra ary kajy any amin’ny telo taona hanombohana ny fianarana fototra.” Namafisiny ihany koa fa tokony hifanaraka amin’ny zavamisy ny fampianarana eto Madagasikara fa tsy atao dika mitovy amin’ny rafitra frantsay. Izany indrindra no anton’ny PSE izay hanova ny rafitra manontolo: tsy ny teny ibeazana ihany fa ny tetiandro, ny fandaharam-pianarana, ny fiofanan’ny mpampianatra sy ny maro hafa.
Hamaranako azy ireto antontanisa navoakan’ny SEFAFI ireto: 6%-n’ny Malagasy ihany no mahafehy ny teny frantsay, 15,87% no mampiasa izany indraindray, 83,61%-n’ny mponina eto Madagasikara indray no tsy mahay afa-tsy fiteny malagasy ary 0,57% dia miteny ny teny frantsay fotsiny ihany. Koa samia ary mandinika isika.
Fanagasiana, Plan Sectoriel de l'Education, PSE Madagascar, tenim-pirenena ibeazana, tenin-dreny, teny ibeazana, teny malagasy